musha Kanadha Singers Drake Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nhoroondo Yese yeGlobal Celeb inonyatsozivikanwa nezita rezita rezita "OVO". Dhaka Yedu Childhood Story pamwe Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Drake Yehucheche Nyaya - Iyo Ongororo kusvika zvino.
Hongu, munhu wose anoziva iye ndeimwe yenyika inonyanya kutengesa mimhanzi artists. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Aubrey Drake Graham's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Drake Yehucheche Nyaya - Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri kumashure:
Kutanga, Aubrey Drake Graham akaberekwa musi we 24th waOctober 1986 kuToronto muOntario, Canada. Akanga ari oga mwana akaberekerwa kubatana pakati paamai vake, Sandra "Sandi" Graham nababa vake, Dennis Graham.
Drake Vabereki Dennis naSandra.
VaCanada vemarudzi akasiyana-siyana neveAfrica-America neAshkenazi midzi yevaJudha vakanga vakwegura 5 apo vabereki vake vakaparadzana. Kutevera kurambana, Drake akakurira muToronto naamai vake.
Drake akarererwa muToronto naamai vake Sandra.
Kukura muToronto, Drake mudiki aive akapoteredzwa nemasimba emimhanzi uye aive nenhaka yakapfuma muunyanzvi. Baba vake, Dennis aive muridzi wengoma yeanozivikanwa rock'n 'roll nyeredzi, Jerry Lee Lewis kuMemphis.
Dennis aigara achienda kuToronto nechinangwa chekuunza mudiki Drake kuzoona mimhanzi yake uye hupenyu kuMemphis.
Drake aigara achipedza zhizha nababa vake kuMemphis.
Kunyanya zvakadaro, Drake aiva nababamunini vaviri vebaba vaishanda nesimba mumimhanzi. Vanosanganisira Larry Graham (gitare) naTeenie Hodges (muimbi) apo amai vake vanamai vanozivikanwa nokuda kwevana vaAthatha Franklin uye vane "mimhanzi yakanyanya".
Dzidzo yaDrake inosanganisira zvidzidzo zvake kuForest Hill Collegiate Institute muToronto. Paaive pachikoro chevachena-chese chena, midzi yakasviba yaDrake neyechiJuda yakamuona achinzwa kusurukirwa uye kushungurudzwa.
Nekudaro, dzidzo yaDrake pachikoro yakanga isina isina sirin'i sezvo aive nemumwe waaidzidza naye uyo akamubatsira kuti amubatanidze kune vanokurudzira muindasitiri yekuita.
Drake aigara achishungurudzwa achiri kuchikoro chesekondari.
Waaidzidza naye akaunza Drake kuna baba vake vaishanda seanoshanda. Kutora, mumiriri akaisa Drake mukubvunzurudzwa kwakabudirira uye mushure mezvo akamubatsira kutora chinzvimbo pane yeCanada teen mutambo akateedzana "Degrassi".
Kwakazotevera mabasa edzidzo akaona Drake achienderera kuVaughan Road Academy muToronto kwaakadhererwawo nekuda kwerudzi rwake nechitendero chake.
Drake akashungurudzwawo paVaughan Road Academy yekuve vese vemarudzi uye maJuda.
Akazopedzisira abuda kuchikoro chesekondari apo purogiramu yake yakabatikana yekirasi yakatanga kupesana nemabasa ake. Yakanga isiri kusvikira gore ra 2012 iro Drake akazopedzisira apedza chikoro chesekondari.
Drake Biography - Yekutanga Basa Rehupenyu:
Makoronike ehupenyu hwaDrake hwepakutanga hwehupenyu anotsanangura zvaakashandisa mukutamba chinzvimbo cheye Basketball nyeredzi yakashanduka kuve chirema pane vechidiki mutambo mutambo, "Degrassi".
Kunyangwe Drake aivewo nezvaaifarira mumimhanzi, akaona kuita mune akateedzana kwakakosha sezvo zvaimupa mari yekutarisira amai vake vairwara.
Drake mumutambo wevechidiki, Degrassi.
Paakapedza mabasa ehupenyu hwake mukuratidzwa, Drake akapinda munziyo mushure mekunge akafuridzirwa Jay Z uye vanoverengeka vatema mimhanzi maartist.
Akaburitsa yake yekutanga mixtape "Kamuri yekuvandudza" mu2006 uye akaenderera mberi kuburitsa mamwe maviri akabudirira mixtapes asati asayina rekodhi dhiri na Lil Wayne's Young Money Entertainment inonyora.
Drake Biography - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
2009 ndiyo gore iro Drake akatanga kutumira bhuku rake rekutanga "Thank Me Later" nemipiro kubva kuna Lil Wayne, Jay Z uye Kanye West.
Apo Drake akanga aripo, akashanda zvakanyanya kuita kuti album iite hit kusanganisira kubvunzurudza kunonoka mukusunungurwa kwayo kuitira kuwedzera kupedzisa kugunzva.
"Nditendei Gare gare" yakazobudiswa muna June 15 2010. Kunyange zvazvo album yacho yakatangira pane imwe nhamba paBillboard 200, yakakundikana nezvakatarirwa naDrake nemuzvivambi achibvuma kuti akakurumidza yakawanda nziyo uye aida kuti dzimwe ndima dzichinjwa.
Drake haana kugutsikana nematragi mu "Nditendei Gare gare" album uye akashuvira kuti dai akange ave nehanya nekuzvinyora.
Drake Biography - Kumuka Mukurumbira Nhau:
Achigadzirisa zvakaipa zvebhuku rake rekutanga, Drake akatumidza dambarefu rake reti studio "Chenjera" uye akaenda nehunyanzvi nekubatanidza R&B uye pop mairi. "Chenjera" yakaburitswa munaNovember 15, 2011, uye yakagashira wongororo dzakanaka kubva kune vanoongorora zvemimhanzi.
Drake's "Chengeta" album kavha.
Iyo album yaiva nemhando dzakawanda dzakadai se "Camera" uye "HYFR", dzakagamuchira chikamu cheGrammy nokuda kwepamhanzi rap rap uye yakawana kubudirira kwekutengeserana kukuru nekutengesa kwemamiriyoni e2.6 muUnited States. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Drake Rudo Hupenyu:
Drake achiri kuzoroora panguva yekunyora. Tinokuunzira chokwadi nezve yake yekufambidzana nhoroondo uye yazvino hukama chinzvimbo.
Muimbi we rap anozivikanwa kuti akange aine rudo rwekufashukira nevakadzi vanoverengeka vaiita zvemodelling uye nevaya vari muindasitiri yevaraidzo. Ivo vanosanganisira Keshia Chante, Bria Myles, Tyra Banks, uye Crystal Westbrooks.
Nhoroondo yekufambidzana yaDrake. Kubva kuRR: Keshia Chante, Bria Myles, Tyra Banks, uye Crystal Westbrooks.
Vamwe vakanga vari Rihanna, Jennifer Lopez, Sophie Brussaux uyo akamuberekera mwanakomana Adonis (akaberekwa muna October 24th) naMalaika Terry.
Drake akambodanana (kubva kuRR): Rihanna, Jennifer Lopez, Sophie Brussaux naMalaika Terry.
Ari panguva yekunyora kufambidzana nemusikana wechidiki anonzi Bella Harris. Mhuka dzinotaridzika dzinotarisa zvakakwana pamwechete uye dzinogona kutora ukama hwavo kune imwe nzvimbo inotevera.
Drake ari kufambidzana neyekuyaruka modhi Bella Harris panguva yekunyora iyi bio.
Drake Hupenyu Hwemhuri:
Drake inobva kumuchechi wepamhuri yemhuri. Tinokuudza chokwadi nezvehupenyu hwemhuri yake.
Nezvebaba vaDekake: Dennis Graham ndibaba vaDrake. Akarambana naamai vaDrake paakanga akura 5. Zvisinei, akasimbisa hukama hwepedyo naDrake. Dennis anozivikanwa nekushanda semudhiriri weanozivikanwa rock'n 'roll nyeredzi, Jerry Lee Lewis.
Zvisinei, akazogamuchira mhosva nekutengesa zvinodhaka uye akaiswa mutirongo kwenguva. Dennis achiri kuwirirana nehukama hwepedyo naDrake nevamwe vake vana vaakaberekerwa kubva kuhukama hwakasiyana.
Drake NaBaba Dennis.
Nezveamai vaDekake: Sandra Sandi Grahams ndiamai vaDrake. Akashanda semudzidzisi Drake asati aberekwa uye akaenderera mberi nekumurera saamai vasina murume mushure mekurambana nababa vaDrake.
Saamai vane rudo vechiJuda, Sandra aive nesimba rakakura kuna Drake uye akaona mukurerwa kwake maererano nezvitendero zvechiJuda. Iye pasina mubvunzo munhu wepedyo kuna Drake uye anomutsigira munzira dzakawanda.
Drake naamai vake Sandra.
Nevana vaDheake: Drake ndiye mwana akaberekwa ari oga kubatana pakati pevabereki vake. Anongova nehafu-vana vababa vakaberekerwa nababa vake kubva paukama hwakasiyana. Vanosanganisira hanzvadzi dzake shomanana dzinonzi Steph naRaemiah Julianna apo hakuna marekhodi ehama dzake.
Drakes Hafu hama nehama Raemiah Julianna (kuruboshwe) naSteph (kurudyi).
Nezvehama dzaDrakake: Kure kubva kumhuri yepedyo yaDrake, vanasekuru naamai vake vaive Reuben "Ruby" Sher naEvelyn Etta Brontman nepo zvishoma zvichizivikanwa nezve sekuru nasekuru vake.
Babamunini vake ndiTeenie Hodges (muimbi) naLarry Graham (gitare). Iko hakuna marekodhi amaiguru vake, babamunini uye babamunini ivo babamunini vake vasati vazivikanwa muzviitiko zvinozivikanwa zveupenyu hwake hwepakutanga kusvika zvino.
Drake Hupenyu hweMunhu:
Chii chinoita kuti Drake akanganise? Gara shure apo tinokuunzira maitiro ehupenyu hwake kuitira kuti tibatsire kuwana mufananidzo wakazara wake. Kutanga, Drake's persona isanganiswa yeScorpio Zodiac unhu hweunhu.
Anoshuva, anononoka, ane unhu hukuru uye anotsanangura zvakawanda pamusoro pehupenyu hwake hwega uye hwepachivande kuburikidza nokuzviisa munziyo dzake. Zvaanoda uye zvinokanganisa zvinosanganisira kutamba basketball, kutamba ice, kufamba, kutarisa mafirimu uye kupedza nguva neshamwari dzake nemhuri.
Kutamba basketball ndechimwe chezvavaifarira Drake.
Drake ine mambure inokosha kupfuura $ 150 mamiriyoni panguva yekunyora. Mhedzisiro yeupfumi hwake inobva pamabasa ake emimhanzi, kubvumirana nekugadzirisa uye mabhizimisi ekufambisa apo kuongororwa kwekushandisa kwake maitiro kunoratidza kuti anorarama mararamiro anoumbozha.
Murape uyo ane mari yakawanda kupfuura yaanokwanisa kupedza ane $ $ 7.7 mamiriyoni muHidden Hills, Los Angeles. Imba yacho yakagadzirirwa zvinhu zvakadai segoroti, raibhurari, tennis court, a cavernous yevha yevhavha, gym uye nzvimbo yekuongorora.
Wemuchadenga anoona Drake's $ 7.7 mamirioni Hidden Makamuri emba.
Raviro yaDrake mumotokari inoratidzawo mari inodhura yekushandisa sezvo iye aine muunganidzwa unotyisa unosanganisira kukwira kwekunze saMercedes Maybach Pullman, Bentley Mulsanne, Bentley Continental, Rolls Royce Dawn, Lamborghini Aventador, Bugatti Veyron Sang Noir naMcLaren 675 LT.
Drake akaona achityaira Lamborghini yake.
Drake Untold Chokwadi:
Kuvhara nyaya yedu ye Drake yehuduku uye biography pano inonyanya kuzivikanwa kana chokwadi chisingaverengeki chisina kubatanidzwa muhupenyu hwake.
Drake ine mifananidzo yakawanda yakakurumbira yakave ichionekwa kusvuta uye kunwa kakawanda.
Nezvechitendero chake, Drake akakwidziridzwa wechiJudha naamai vake uye akaita kuti Barmitzvah wake semwana. Anoramba achienderera kune zvechiJudha uye anobvuma kuti Mwari uye kutenda zvakakosha kwaari.
Drake muJudha akazvipira.
Akamboita mumabhaisikopo anosanganisira mutemo waMookie uye akaita kuratidzika kwakauya mu "Kuputsa" uye "Funga Semurume Zvakare".
Kuisa mari kwaDrake uye bhizinesi zvinosanganisira rake rekodhi OVO, bourbon-based whiskey - Virginia Nhema pakati pezvimwe zviwanikwa.
Drake pakuvhurwa kwake bourbon-based whiskey - Virginia Nhema.
Drake Biography Vhidhiyo Pfupiso:
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Aubrey Drake Graham Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!